Ukulanda kwamahhala kweRoblox (2020) - Windows, Android & Mac - Ukudlala
URoblox ungomunye wemidlalo ethandwa kakhulu ukudlala imidlalo ku-inthanethi. Isisekelo sabalandeli balesi sihloko sikhulu. Intsha evela emhlabeni wonke ijabulela indawo enabadlali abaningi. Akudingi ukulandwa okukhulu kwe-inthanethi, njengezinye izindlela eziningi. Umdlalo olanda kalula ungasebenza kunoma iyiphi ikhompyutha. Izidingo zohlelo nazo azinzima kangako. Kulo mhlahlandlela, sizoxoxa ngakho konke mayelana nomdlalo.
Sizobheka ukuthi ungayilanda kanjani iRoblox kwi-PC yakho. Abafundi bethu abaningi bafuna ukuqala ukujabulela isihloko sabadlali abaningi. Ikulethela zonke iziqu ezintsha ezimangazayo.
Ungayilanda Kanjani iRoblox?
Inqubo yokulanda iRoblox ilula. Umdlalo uyatholakala kuwo wonke amapulatifomu. Sizobheka ukuthi ungayisebenzisa kanjani. Kukhona izinyathelo ezahlukahlukene ongazisebenzisa. Abafundi bethu bangalandela okokufundisa okunikezwe ngezansi ukuqala ukudlala.
Izinyathelo Zokulanda i-Roblox ku-Windows:
I-PC yipulatifomu yokuya kubadlali emhlabeni jikelele. Itholakala kalula, futhi wonke umuntu angaqala ukudlala kule divayisi. Nazi izinyathelo zokulanda umdlalo.
Isitolo seMicrosoft siyikhasi lasekhaya lazo zonke izidingo zakho zeRoblox.Ungakwazi vakashela lesi sixhumanisi, ukuya ekhasini lokulanda iRoblox.Izokuqondisa esitolo seMicrosoft.
Abasebenzisi beWindows bangachofoza inkinobho yokufaka ukuze umdlalo usebenze kukhompyutha yabo. Isinyathelo siqonde impela. Abasebenzisi futhi badinga ukungena ngemvume besebenzisa i-akhawunti yabo ye-Microsoft ukuze basebenzise kalula uhlelo. Kumahhala ukudlala lo mdlalo, ngakho-ke ngeke kube khona ukudonswa kwemali ku-akhawunti yakho.
Kuyamangalisa! Manje ukulanda kuzoqala kumshini wakho wewindows. Abasebenzisi bangaqala ukusebenzisa le nkundla ngokuzama imidlalo engaphansi ehlukile. Sithemba ukuthi unesikhathi esihle sokujabulela lo mdlalo oyigugu.
Landa iRoblox for Consoles:
I-Roblox iyatholakala futhi ngama-Gaming Consoles akho. Idume kakhulu kubasebenzisi kuwo wonke amapulatifomu.Abadlali abaningi badlala imvelo eguquguqukayo yalesi sihloko esihle. Kulesi sigaba, sizokukhombisa izinyathelo zokuzilanda ku-Xbox One yakho. Ngeshwa, umdlalo awutholakali kubasebenzisi be-Sony PS4. Ungazama ku-Microsoft Xbox yakho usebenzisa lezi zinyathelo ezilandelayo.
Abasebenzisi kufanele bavakashele isitolo kumadivayisi wabo we-Xbox. Ipulatifomu ye-Microsoft ihlanjululwe impela, ngakho-ke ukubukeka kuyefana. Ungakwazi Chofoza lapha . Izokusa ekhasini lokulanda ku-Xbox.
Cindezela inkinobho A kusithonjana sokufaka. Umdlalo uzoqala ukulanda ngemuva. Uzokwazi ukuyikhetha esikrinini sakho sasekhaya ngemuva kokufakwa.
Kunconywa ukuthi abasebenzisi babe nokubhaliselwe kwe-Xbox Live ukujabulela izici ze-premium zabadlali abaningi online. Kuyisidingo sabo bonke abasebenzisi. Awukwazi ukudlala imidlalo yakho ku-inthanethi ngaphandle kwalokhu okubhaliselwe. Sithemba ukuthi unesikhathi esihle nesihloko seRoblox kukhonsoli yakho.
Umdlalo weRoblox uyatholakala kuwo wonke amadivayisi wethu we-smartphone. Kuyisicelo esilula esingadli izinsiza eziningi. Ama-smartphones amaningi anamuhla akwazi ukuwusekela ngokugcwele lo mdlalo. Ungayisebenzisa kumadivayisi we-Android naku-iOS. Ukugembula kwamaselula kuya ngokuya kwanda kulezi zinsuku. Siyathanda ukudlala ngokuzungeza. URoblox unikeza ithuba elihle lokubulala isikhathi emsebenzini ngenkathi uhlehlisa. Abaningi bethu bebelokhu bedlala iRoblox ku-PC. Kubasebenzisi abanjalo, ikunikeza ithuba lokuzwa umdlalo usohambeni. I-akhawunti eyodwa ingasebenza kuwo wonke amadivayisi. Kumahhala ngokuphelele ukudlala, ngakho-ke azikho izingqinamba. Abasebenzisi bangalanda umdlalo kuma-Smartphones abo besebenzisa izixhumanisi ezinikezwe ngezansi.
Sithemba ukuthi uzoba nesikhathi esihle ngenkathi udlala usohambeni!
Bhalisela i-Akhawunti yeRoblox: Izinyathelo
Abasebenzisi badinga ukudala i-akhawunti yamahhala ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ngamandla alo aphelele. Kulesi sigaba, sizobheka ukuthi ungayithola kanjani i-akhawunti yeRoblox. Kuyadingeka ukuqala ukudlala amabalazwe ahlukahlukene atholakala endaweni yesikhulumi. Ungalandela umhlahlandlela onikezwe ngezansi ukukhomba izindawo ezisemqoka zomsebenzi. Nazi izinyathelo.
Isinyathelo esibaluleke kakhulu ukuvakashela iwebhusayithi yesikhulumi seRoblox. Ungachofoza kulesi sixhumanisi - https://www.roblox.com/ .Kuzokusa kusayithi lomdlalo elisemthethweni. Abasebenzisi bangakha i-akhawunti entsha yeRoblox kusuka lapha.Ikhasi lasekhaya likunika inketho yokubhalisa.
Ikhasi lasekhaya laseRoblox likubuza mayelana neziqinisekiso eziyisisekelo zomsebenzisi. Noma ngubani angabhalisa futhi adale i-akhawunti entsha. Itholakala kalula kuwo wonke umuntu oku-intanethi. I-akhawunti imahhala ngokuphelele ukubhalisa kuwebhusayithi yeRoblox. Kufanele ufake imininingwane efana nosuku lokuzalwa, i-imeyili, bese wenza iphasiwedi. Uma usukwenzile, abasebenzisi abafanayo bangaqhubeka nokubhalisa.
Qala umdlalo weRoblox kumadivayisi akho bese ungena ngemvume usebenzisa iziqinisekiso. I-akhawunti izosebenza ngokushesha ngaphandle kwezinkinga nhlobo. Ungadlala usebenzisa le akhawunti kwi-PC, i-Android, i-iOS, ne-Consoles.
Voila! I-akhawunti yakho yamahhala isiyasebenza manje. Abasebenzisi bangaqala ukudlala ngale akhawunti yamahhala kuwo wonke amapulatifomu. Iningi lama-akhawunti eRoblox alidingi ukuthi ube nekheli le-imeyili futhi. Ilungele intsha efuna ukuqala ukudlala ngaphandle kwezinkinga. Sithemba ukuthi izinyathelo zethu bezicacile ukuthi zingasetshenziswa.
Siyethemba umqondisi wethu ukwazile ukuphendula yonke imibuzo yakho mayelana nokulanda kweRoblox. Kunezindlela ezahlukahlukene zokuqala ukugembula kumadivayisi akho. Kulesi sihloko, sihlanganisa izinhlobo zakamuva zomdlalo. Qala ukudlala kumafoni akho namuhla.
uhlelo lokusebenza lomdlali womculo we-android mahhala
bukela ama-movie ku-inthanethi mahhala ama-123movies
bukela ama-movie wamahhala nemibukiso
ama-movie we-hd english online mahhala
iwebhusayithi yokubuka i-tv ebukhoma